တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Bilateria - ဝီကီပီးဒီးယား
(unranked): Unikonta [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
(unranked): Opisthokonta [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
(unranked): Holozoa [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
(unranked): Filozoa [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
လောက: Animalia [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
လောကသေး: Eumetazoa [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
Clade: Bilateria [Taxonomy; တည်းဖြတ်]
ဝီကီပီးဒီးယားတွင် Bilateria အကြောင်း ဆောင်းပါးမရှိသေးပါ။ ဖန်တီးရေးသားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ သင်လက်ရှိ ကြည့်ရှုနေသော စာမျက်နှာတွင် Bilateria ၏ သိပ္ပံနည်းကျ အမျိုးအစားခွဲခြင်း အချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤနေရာကို အဘယ့်ကြောင့်ရောက်ရသလဲ သေချာမသိပါသလား? ဝီကီပီးဒီးယား taxonomy နှင့် စတင်လိုက်ရအောင်။
Taxonomic references: Ryan, Joseph F. (2010-10-04). "The homeodomain complement of the ctenophore Mnemiopsis leidyi suggests that Ctenophora and Porifera diverged prior to the ParaHoxozoa". EvoDevo 1 (1): 9. doi:10.1186/2041-9139-1-9. ISSN 2041-9139. PMID 20920347.
Giribet, Gonzalo (2016). "Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects" (in en). Zoologica Scripta 45: 14–21. doi:10.1111/zsc.12215. ISSN 1463-6409.
Ryan, Joseph F. (2010). "The homeodomain complement of the ctenophore Mnemiopsis leidyi suggests that Ctenophora and Porifera diverged prior to the ParaHoxozoa". EvoDevo 1 (1): 9. doi:10.1186/2041-9139-1-9. ISSN 2041-9139. PMID 20920347.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Bilateria&oldid=702081" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။